Nhau - Ndezvipi zvinhu zvinokodzera simbi laser yekucheka muchina
Ndezvipi Zvinhu Zvinokodzera Simbi Laser Kutema Muchina
Kuberekwa kwesimbi Laser yekucheka muchina ari kunyanya kuvandudza kushanda kunyatsoshanda uye achicheka kururama. Asi kugona kwepamusoro uye kunyatsoita kure zviri kure nezvingaitwe nekushanda kwevanhu.
Nekufambira mberi kwenzanga, hunyanzvi hwekuwedzera tekinoroji hunoshandiswa kumunda wekushandisa mazita Semuenzaniso, laser chinhu chinoshamisa uye chisinganzwisisike kune vanhuwo zvavo muzana rekupedzisira. Zvino, nekuvandudzika kwetekinoroji, laser yakashandiswa mumaindasitiri mazhinji. Nhasi, ngatikurukurei izvo zvigadzirwa izvo zvakakodzera Laser yekucheka muchina.
1. Carbon simbi ndiro yekucheka:
Jiatai laser yekucheka sisitimu inogona kutema iyo yakanyanya hukobvu yekabhoni simbi ndiro padhuze ne20 mm, uye iyo yakatemwa yeplate yakatetepa inogona kuderedzwa kusvika ingangoita 0.1 mm. Iko kupisa kwakakanganisa nzvimbo ye laser kucheka yakaderera kabhoni simbi idiki kwazvo, uye iyo yekucheka mubatanidzwa yakati sandara, inotsvedza uye ine yakanaka perpendicularity Kune yakakwira kabhoni simbi, mhando ye laser yekucheka kumucheto iri nani pane iya yepasi kabhoni simbi, asi kupisa kwayo kwakakanganisa nzvimbo kwakakura.
2. Stainless simbi yekucheka:
Laser kucheka kuri nyore kutema isina simbi sheet. With mukuru simba internet Laser nokuveza hurongwa, kunonyanyisa ukobvu Stainless simbi anogona kusvika 8mm.
3. Chiwanikwa simbi ndiro yekucheka:
Yakawanda alloy simbi inogona kutemwa ne laser, uye mhando yekucheka kumucheto kwakanaka. Asi kune yesimbi simbi uye inopisa kufa simbi ine yakakwira tungsten zvemukati, pachave nekukukurwa uye slag kunamatira panguva ye laser kucheka.
4. Aluminium uye alloy ndiro yekucheka:
Aluminium yekucheka ndeyeyekunyungudutsa kucheka. Hunhu hwakanaka hwekucheka hunogona kuwanikwa nekufuridza zvinhu zvakaumbwa munzvimbo yekucheka negasi rinobatsira. Parizvino, ukobvu hwakawanda hwekucheka aruminiyamu ndiro iri 3mm.
5. Kucheka kwezvimwe zvinhu zvesimbi:
Mhangura haina kukodzera kucheka laser. Iyo yakaonda kwazvo. Mazhinji etitanium, titanium chiwanikwa uye nickel chiwanikwa inogona kutemwa ne laser.